Todoist, waa la cusbooneysiiyay iyadoo laga faa'iideysanayo wararka ku saabsan iOS 10 | Wararka IPhone
Todoist, waa la cusbooneysiiyay iyadoo laga faa'iideysanayo wararka iOS 10
Waqtigan xaadirka ah App Store waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo ah oo loogu talagalay in lagu fududeeyo maalinteena maalin, taas oo noo ogolaaneysa qor howlaha sugaya in la qabtoAma joojinta Apple Store si ay u iibsato kiis cusub oo ku saabsan iPhone-keena, ama xusuusinta nafteena inaan ku qasban nahay inaan dhammeyno warbixintii ugu dambeysay ee iibka ka hor dhammaadka toddobaadkan.
Wunderlist iyo Todoist waa codsiyada sida ugu fiican u maareeya macluumaadka noocan ah, qayb ahaanna waxaa ku mahadsan xaqiiqda ah inay yihiin qaab-dhismeed badan. Si kastaba ha noqotee, Todoist wuxuu ka muuqdaa korka Wunderlist qaababka qaar, taas oo jaleecada hore u muuqan karto mid aan muhiim ahayn, laakiin qoto dheer oo hoose waxay saameyn ku yeelan kartaa go’aanka aan ka gaarno midka iyo kan kale.
Sidoo kale tan iyo markii Microsoft ay heshay Wunderlist, Waxay umuuqataa in adeegii cusbooneysiinta ee warka cusub hoos udhacay oo waayadan dambe si dhib ah nooma ay keento astaamo cusub mar kasta oo cusboonaysiin la soo saaro. Todoist ka soo horjeedka ayaa dhacaya, tan iyo ugu yaraan bishii hal mar, ragga ka socda Todoist waxay cusbooneysiiyaan arjiga iyagoo ku daraya shaqooyin cusub ama hagaajinaya kuwa jira.
Caqli ahaan, ka dib markii si rasmi ah loo sii daayay macruufka 10, Todoist ayaa kaliya cusbooneysii barnaamijkaaga iOS si aad uga faa'iideysato astaamaha cusub in shirkadda ku saleysan Cupertino ay oggoshahay, in kasta oo had iyo jeer la jaanqaadka xaddidaadaha ay Apple ku soo rogto horumariyeyaasha, xaddidaadaha aysan iyagu iyagu si fiican u fahmin, laakiin kuwaas oo kale ah. Mawqifkani waa shay waa hore joojiyay soo jiidashada indhaheena.
Maxaa ku cusub nooca Todoist 11.2
Fidil nadiifiye iyo fudfudud ah oo dhigaya liistadaada maanta waxa aad qabanaysid farta ama 3D taabashada. (Waxaad u baahan doontaa inaad u isticmaasho iOS 10 si ay u shaqeyso.)
Dib-u-habeyn Wadaag ah oo Wadaag ah oo ka dhigeysa Degdeg Ku dar muuqaal ka dhakhso badan sidii hore isla markaana abaabusha mareegaha sida howlaha Todoist-ka oo aan xitaa baddelayn barnaamijyada (oo ku habboon maaraynta macluumaadka xad-dhaafka ah iyo la socoshada liiskaaga akhriska).
Todoist dib loo naqshadeeyay oo loogu talagalay Apple Watch oo ku siinaya ikhtiyaarka aad ku dooran karto aragtidaada caadiga ah ee hawlaha la furayo marka aad bilawdo barnaamijka - u habee sida aad u isticmaasho Watch-kaaga.
Waxaan dib ugu dhisnay Todoist-ka Apple Watch si aan wax badan uga "dhakhso badan". Taasi waxay ka dhigan tahay yareynta gacantaada sugitaannadaas foosha xun inta howlahaagu culeys yihiin, iyo inaad aad ugu qanciso asxaabtaada iyo asxaabtaada xaqiiqda ah inaad noloshaada ka ilaalinayso curcurkaaga. (Xeelad wanaagsan oo ciidaha ah, na aamin).
Todoist: Liistada Sameefree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Todoist, waa la cusbooneysiiyay iyadoo laga faa'iideysanayo wararka iOS 10
Pokémon Go waa la cusbooneysiiyay oo noo oggolaanaya inaan dooranno lammaane Pokémon
IOS 10 xiriiriyeyaasha soo dejinta